Waa maxay noocyada duufaannada 'tornaado'? | Saadaasha Shabakadda
ka duufaan Waa astaamaha saadaasha hawada oo cabsi geliya oo soo jiita dad badan si isku mid ah. Oo iyagu waa xoogga ugu waxyeellada badan ee dabiiciga ah, oo awood u leh inay gaaraan 400 kiiloomitir saacaddii iyadoo burburinaysa wax kasta oo jidkeeda ku jira.
Laakiin, in kastoo ay dhammaantood isku mid u eg yihiin, haddana run ahaantii way jiraan noocyada kala duwan ee duufaannada. Noo sheeg waxa ay yihiin.
1 Noocyada duufaannada
1.1 Duufaanno badan oo duuf badan
1.3 Dhul xayiraad
2 Waxay u egyihiin duufaanno ... laakiin maahan
2.2 Boor ama ciid ku wareegeyso
2.3 Dabka wareegaya
2.4 Steam wareegaya
Duufaanno badan oo duuf badan
Waa duufaan ay ku jirto laba ama ka badan tiirarka hawada ee socda ayaa ku wareegaya xarun guud. Waxay ka muuqan karaan wareegga hawo kasta, laakiin waxay ku badan yihiin duufaannada daran.
Sidoo kale loo yaqaan tuubada biyaha, waa duufaan ku dul taal biyaha. Waxay ku sameysmaan biyaha kuleylaha iyo kuleylka, saldhigyada daruuraha ee loo yaqaan Cumulus ciriiriga.
Sidoo kale loo yaqaanno duufaan aan supercellular ahayn, duufaan, ama daruur qumman, ama dhulka dushiisa - Ingiriisi, waa duufaan aan ku xirnayn mesocyclone. Waxay leeyihiin cimri-gaaban, iyo mashiin uumiga uumiga oo inta badan aan dhulka taaban.
Badanaa way ka itaal yar yihiin duufaannada caadiga ah, laakiin maahan inay aad ugu soo dhowaadaan maaddaama ay waxyeello weyn u geysan karaan.
Waxay u egyihiin duufaanno ... laakiin maahan
Waxaa jira qaabab dhowr ah oo u muuqda duufaano, laakiin dhab ahaantii maahan:
Waa eddy yar oo toosan oo la xidhiidha cirridka hore ama hunguriga hoose. Iyagu kuma xirna salka daruur, sidaa darteed looma tixgeliyo inay yihiin duufaanno.
Boor ama ciid ku wareegeyso
Waa sadar hawo ah oo hawo ah oo iskeed isku wareegeysa markay socoto, laakiin ka duwan duufaannada, foomamka ku hoos jira cirka cad.
Waa wareegtooyin taas horumariyo dababka dabka, loomana tixgeliyo inay yihiin duufaanno illaa ay ku xirmaan daruur cumuliform ah.
Waa dhacdo aad dhif u ah in la arko. Waxay ka samaysantaa qiiqa ka baxa qiiqyada warshad koronto. Waxay sidoo kale ku dhici kartaa ilaha kulul, marka hawo qabow ay la kulanto biyo diiran.
Miyaad maqashay noocan oo kale ah duufaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay noocyada duufaannada 'tornaado'?